घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू मार्सेल सबिट्जर बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो मार्सल सबिट्जर बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, कारहरू, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो अस्ट्रियाका पेशेवर फुटबलरहरूको जीवन कहानी हो। हामी उनको बाल्यकाल देखि शुरू, जब उहाँ प्रसिद्ध भयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा बाल्यकाल छ - मार्सेल सबिट्जरको बायोको एक सारांश।
मार्सेल सबिट्जरको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ एक गोलकिर मिडफिल्डर हुनुहुन्छ जो एक महान हत्यारा वृत्तिको साथ छ। जहाँसम्म, केवल केहि थोरैले मार्सेल सबिट्जरको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं, पहिले हाम्रो सामग्री तालिकाको अघि पूर्ण कहानी.
मार्सेल सबिट्जरको बाल्यकाल कहानी:
सुरू गर्दै, सुरू गर्दै, उनको उपनाम "ठूलो साबी"। मार्सेल सबिट्जर मार्च १ 17 1994 March को मार्च १ the तारिखमा अस्ट्रियाको स्टायरियाको ग्राज शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो बुबा, हेरफ्रेड सबिट्झर र आमामा जन्मेका दुई भन्दा कम बच्चाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ।
त्यहाँ मार्सेलको अष्ट्रियन नागरिकता सम्बन्धी कुनै विवादास्पद वा विवादास्पद प्रश्नहरू छैनन् किनकि अभिलेखहरूले प्रमाणित गर्दछ कि उनी आफ्नो जन्म शहर अस्ट्रियाको स्ट्यारियामा ग्राजमा हुर्केकी थिइनन्।
मार्सेल सबिट्जर अस्ट्रियाको स्टायरियाको ग्राज शहरमा हुर्केका थिए।
ग्राजमा हुर्केका, मार्सेलका लागि फुटबल नखोज्नु लगभग असम्भव थियो। सुरुमा, उनको जन्म शहर फुटबलर बन्न उत्सुक सानो बच्चाहरूलाई मन पराउने धेरै फुटबल विकास केन्द्रहरू थियो। अझ, मार्सल सबिट्जरका आमा-बुबामध्ये एक (उसको बुवा) १ 1995 1998१-१ .XNUMX between बीच उही शहरमा पेशेवर फुटबल सments्लग्नता थियो।
मार्सेल सबिट्जरको परिवार पृष्ठभूमि:
भनिन्छ कि फुटबल मार्सेल सबिट्जरको परिवारको रगतमा खेल्ने उसको खेल बुबा ड्या Her्गफ्रिड सबिट्जरलाई धन्यवाद। तल चित्रित हेरफ्रेड छ जुन आफ्नो छोराको जन्मको बेला अस्ट्रिया क्लब LASK लिन्जका लागि खेलिरहेका थिए।
मार्सेल सबिट्जरका बुबा - हर्फ्रिड मार्सलको जन्मको समयमा एक पेशेवर फुटबल खेलाडी थिए।
फुटबलको माध्यमबाट, उनले आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न सक्षम थिए। हेरफ्रेडले आफ्नी श्रीमतीलाई भर्खरै जन्मेको मार्सललाई हुर्काउन मद्दत गर्ने समयको बृद्धि गर्नका साथै हिंड्न सिक्न अघि नै बिस्तारै उसलाई फुटबलमा परिचय गराउँथे।
एक द्रुत-बढ्दो मार्सेल aged बर्षको उमेर सम्म, ऊ लामो समयदेखि फुटबलको कैनेमेटिक्स, गतिशीलता, ठाउँ र समय आयामका लागि अपरिचित थिएन, बुबाबाट पाएको मार्गनिर्देशनको लागि सबै धन्यवाद।
मार्सेलका बुबाले उनका बाल्यकाल क्लब अदमिरा विलाचमा पनि आफ्नो कवच देख्नुभयो जहाँ उनले २००–-२००१ बीच प्रतिस्पर्धी फुटबल खेले जुन before बर्षको क्यारियर निर्माणमा ग्राजर एकेमा सामेल हुनु अघि।
उनले आफ्नो युवा जीवनको अधिकांश वर्षहरू ग्राज़र एकेका लागि खेले।
फुटबलमा मार्सेल सबित्जरको शुरुआती वर्षहरू:
ग्राजर एके छोडेपछि मार्सेलको अस्ट्रिया वाइन (२०० 2008-२००2009) सँगको एक बर्षे कवच थियो जुन २०० Ad मा अदमिरा वेकर मुडलिंगमा आफ्नो करियर शुरू गर्‍यो। एडमिरा वेकर मुडलिंगमा मार्सलको अकादमी फुटबल खेल्ने क्रममा अन्त भयो। क्लबको पहिलो टीमको साथ आफैलाई प्रस्तुत गर्दै।
२०१०–११ को अस्ट्रियन बुन्डेस्लिगामा उनले क्लबका लागि प्रदर्शन गरेका थिए र दुई गोलको लागि प्रतिस्पर्धाको स्कोर रेकर्ड पनि गरे। यद्यपि मार्सेल अझै प्रख्यात हुनबाट टाढा थिए र उनी आफ्नो क्यारियरको मोडमा पुगेका थिएनन्।
Admira Wacker जहाँ मिडफिल्डरले वरिष्ठ र पहिलो टीमको लागि सुरक्षित पदोन्नति गर्‍यो।
जीवनी तथ्य- प्रख्यात कथाको मार्ग:
मार्सेलको क्यारियरको मोड अहिले २०१ came मा आयो जब उनले जर्मन पक्ष आरबी लाइपजिगसँग id वर्षको करारमा र्यापिड वियनसँग एक बर्षेपछि हस्ताक्षर गरे। मिडफिल्डरलाई तुरून्त रेड बुल साल्जबर्गमा एक वर्षको loanणमा पठाइएको थियो। क्लबमा, मार्सेलले टिमका साथीहरूसँग मिहिनेत गर्न कठिन समय बिताए र यसले उनलाई आफ्नो अभिभावक क्लब आरबी लाइपजिगमा फिर्ता फर्केको देखे।
पढ्नुहोस् मल्लम पोजनिक बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
कुन कुराले उसलाई आफ्नो टीमका साथीहरूसँग रिसायो:
ऊ अत्यधिक महत्वाकांक्षी थियो र आरबी लाइपजिगमा फिट हुन केही संघर्ष गरे।
रेड बुल साल्जबर्गसँगको आफ्नो शुरुआती दिनहरूमा, मार्सेल एक नाजि। अस्ट्रियाको रूपमा चिनिन्थे जसले उनलाई खराब पास दिएका कुनै पनि टोलीसँग रिसाएर लड्न हिचकिचाउँदैन थिए। उनी तालिमको क्रममा आफ्ना एक साथीसँग झगडामा परेका थिए, जुन विकासले तत्कालीन प्रशिक्षक राल्फ र Rang्ग्निकलाई त्यस दिनको प्रशिक्षण समाप्त गर्‍यो। केहीले उनको आलोचना गर्दा, अरूलाई थाहा थियो कि उनी कुनै दिन पिचमा एक महान नेता हुन लागेका थिए।
जीवनी तथ्य- प्रख्यात कथामा उठ्नुहोस्:
भाग्यवस, मार्सल चाँडै नै सही मनोवृत्तिले महत्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्न सक्षम भयो र आरबी लाइपजिगको लागि अत्यन्त मूल्यवान सम्पत्ति भयो जसले उनलाई गोल गर्ने र अचम्मको सेट टुक्राहरू लिन सक्ने क्षमताको लागि उच्च सम्मानमा राख्यो। डेविड बेखम राम्रो पुरानो दिन को।
२०१२/२०२० सीजनमा, आरबी लाइपजिग कोच जुलियन नागल्समन महान आक्रमणकारी मिडफिल्डरलाई रूपान्तरण गरियो। मार्च २०२० मा मिडफिल्डरलाई बेवास्ता गर्न अझ असम्भव थियो तर उनले दुई पटक नेटको फिर्ता भेट्टाए पछिल्लो १ 2020 च्याम्पियन्स लिगमा टोटेनहम हटस्पुरलाई ot-० ले जित्नको लागि आरबी लाइपजिगलाई रेकर्ड गर्न सहयोग गरे।
२०२० मा च्याम्पियन्स लिग प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनलमा प्रगति गर्न RB लेपजिगको लागि कसले सम्भव बनायो हेर्नुहोस्।
विजयले आरबी लेपजिगलाई क्लबको इतिहासमा पहिलो पटक प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनलमा पुग्ने देख्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
मार्सेल सबिट्जरको प्रेमिका, पत्नी र बच्चाहरू:
उनको ख्याति बढेको र युरोपमा आफ्नो नाम कमाउने क्रममा यो निश्चित छ कि धेरै जसो प्रशंसकहरूले मार्सेल सबिट्जरको प्रेमिका को होला भनेर सोधेका होलान् वा यदि उनी वास्तवमै विवाहित छन जसको अर्थ पहिले नै पत्नी हुनु हो।
मार्सेलको प्रेम जीवनमा अघि बढ्दै, उहाँ आफ्नो प्रेमिकासँग धेरै लामो अवधिका सम्बन्धमा हुनुहुन्छ काटजा कुन्ने। लभबर्ड्स (मार्सेल र काटजा) २०१ before भन्दा पहिले भेटिएको थियो र उनीहरूको पहिलो भेटदेखि अविभाज्य भएको छ, धेरैको साथ उनीहरूको सम्बन्धलाई जर्मन फुटबलको सर्वश्रेष्ठ मध्ये एकको रूपमा।
उनको प्रेमिका काटजा कुन्नेसँग मार्सेल सबिट्जरको प्यारो फोटो।
आफ्नो पहिलो बैठक भन्दा पहिले, मार्सेल सबिट्जरकी प्रेमिका (काटजा कुन्ने) एक अभिनेत्री र रियलिटी टिभी स्टार थिए जसले RTL कार्यक्रम जिते “स्नातक"२०१ in मा।
लेख्ने समयमा दुबै व्यस्त छन् र काट्जा कुन्नेलाई छिट्टै मार्सेल सबित्तेरको श्रीमतीको रूपमा लेबल गरिने छ। सत्य कुरा के हो भने, मार्सेल सबिट्जरकी प्रेमिकाले उनको फुटबल स्टारप्रति उनको प्रेमको छाप लगाईन् किनभने उनले उनलाई उनकी छोरी मेरी-लूका आमा बुबा बनाएकी छिन् जुन २०१ who मा जन्मेकी थिइन।
ड्याडी कर्तव्यहरू: के तपाईंले मार्सेल सबित्जर्सको उनकी प्यारी मेरी-लूसँगको यो मनमोहक फोटो देख्नुभयो?
मार्सेल सबिट्जरको पारिवारिक जीवन:
प्रत्येक सफल मिडफिल्डर पछाडि एक समर्थन परिवार छ र मार्सेल कुनै अपवाद छैन। यस खण्डमा, हामी तपाइँलाई मार्सेल सबित्जारका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा-बुबाबाट शुरू गर्ने बारेमा अझ बढी तथ्यहरू ल्‍याउने छौं।
मार्सेल सबिट्जरको बुबामा अधिक:
मार्सेलका बुबा पूर्व प्रोफेशनल फुटबलर हेरफ्रेड सबिट्जर हुन्। एक नजिकको र सहयोगी बुबाको पक्षमा, पूर्व स्ट्राइकर एक सल्लाहकार हुन् जसले मार्सेलले आरबी लाइपजिगको सर्वोत्तम हितका लागि मार्ने घातक हड्तालहरूको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
पढ्नुहोस् अलेक्जेंडर इस्क बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
हेरफ्रीड सबित्ट्जरको जन्म अक्टोबर १ 19।। को अष्ट्रियाको जुडेनबर्ग शहरमा १ th औं दिन भयो। यस शहरमा उनले बाल्यकाल क्लब - एससी सेन्ट जर्जन / जुडेनबर्गको लागि फुटबल खेल्न शुरू गरे।
मार्सेल सबिट्जरका बुबा हेरफ्रेडलाई भेट्नुहोस्।
हेरफ्रेडको क्यारियर शुरुवात १ 1990 13 ० मा अल्पाइन डोनाविट्जबाट शुरू भयो। त्यसपछि उनी २०० 2003 मा सेवानिवृत्त नभएसम्म अर्को १ years बर्षमा अस्ट्रियन क्लबहरूका लागि शीर्ष उडान फूटबल खेल्न गए।
मार्सेल सबिट्जरको आमाको बारेमा:
महान आमाले वर्षौंको अवधिमा ठूला छोराहरू उत्पादन गरे र मार्सेल सबिट्जरको आमा एक अपवाद होइन। उनी आफ्ना पतिको लागि राम्रो पत्नी हुनुका साथै आफ्ना बच्चाहरूको लागि अद्भुत सहयोगी आमा हुन्।
मार्सेलले आफ्नी आमालाई उनको व्यक्तिगत ट्राफीका कस्टोडियन भएकोमा श्रेय दिन्छन् जुन अष्ट्रियामा परिवारको घरमा कपाटमा छन्। उनको अनुसार, उनले सफा गरिन् र कपाटमा उनका सबै ट्राफिकहरू हेर्छिन्।
मार्सेल सबिट्जरका भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
जे होस् मार्सेलले एक पटक एक सानो सानी बहिनीको उल्लेख गरिसकेकी छ जसले आफ्नी आमालाई आफ्नो ट्राफियां जोगाउन सहयोग गर्छिन्। यद्यपि मिडफिल्डरले अझै भाई भएको बारेमा केही भन्न सकेको छैन।
त्यस्तै, मार्सेल सबिट्जरको पारिवारिक जरा र पुर्खाबारे खासै ज्ञात छैन किनकि यो उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। उही उज्यालोमा, त्यहाँ मार्सेल अंकल, काकी, भतीजा र भतिजीको कुनै रेकर्ड छैन।
यद्यपि मार्सेल सबित्जरसँग एक भतीजा छ जसको नाम थॉमस सबिट्जर थियो - जसले लेखनको समयमा - डिफेन्डरको रूपमा लसकका लागि पेशेवर फुटबल खेल्छ। तल चित्रित मार्सल सबिट्जर उहाँ जस्तै धेरै देखिनुहुन्छ। निस्सन्देह, फुटबल फुटेर सबित्जर परिवारमा दौडिन्छ।
मार्सेल सबित्ट्जरको काका भाई थोमा सबित्झरलाई भेट्नुहोस्।
मार्सेल सबिट्जरको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा:
उसको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। मार्सल सबिट्जरको फुटबलबाट टाढा जीवनमा सर्दै, उनीसँग एक धनी व्यक्तित्व छ जुन भावुक, भावनात्मक हिसाबले चालित, आत्मविश्वास र रचनात्मक गुणहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ जसको राशि मीन मीन हो।
मिडफिल्डर जसले आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा तथ्यहरू दुर्लभ रूपमा प्रकट गर्दछन् रुचि र रुचिहरू हुन् जसमा प्रकृतिसँग समय बिताउने, संगीत सुन्ने र आफ्ना साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग पर्खने समावेश छ।
यो अक्सर प्रकृति संग समय खर्च उहाँलाई हाजिर गर्न अनौठो छैन।
मार्सेल सबिट्जरको जीवनशैलीको बारेमा:
सर्वप्रथम, मार्सेल सबिट्जरको जीवनशैलीको बारेमा, यो नोट गर्नु उपयुक्त छ कि उसको सम्पत्ति १० मिलियन यूरो भन्दा बढी छ (लेखनको समयमा)। उसको द्रुत-बढ्दो सम्पत्तिमा स्ट्रिमहरू योगदान पुर्‍याउँदाको पगार र मजदूरीबाट उसले फुटबल खेल्दा प्राप्त गर्दछ। यसका साथै मार्सेलको खर्च गर्ने बानीको विश्लेषणले उनी पैसालाई प्रचलनमा राख्नेमा ठूलो छ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछन्।
मार्सललाई फुटबलबाहिर चिन्नेहरू भन्छन कि विलासी जीवनशैलीमा जीवन बिताउने मिडफिल्डरलाई समात्नु गाह्रो छैन। जे होस् मार्सेल एक मध्य-दायरा कमाउने हो र यसमा अचम्मका घरहरू र विदेशी कारहरूका लागि केही छ। ऊ बिदालाई मन पराउँछ र उसको सानो साथी (आफ्नो कुकुर) सँग गुणस्तरीय समय बिताउन अपरिचित हुँदैन।
हामीलाई थाहा छैन उहाँ कुन ब्रान्डको कारमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। जे होस्, कुकुरलाई लाग्छ कि यो यसमा हुन पाउनु सम्मानको कुरा हो।
मार्सेल सबिट्जरको तथ्यहरूको बारेमा:
हाम्रो मार्सेल सबिट्जरको बाल्यकाल कहानी र जीवनी समेट्नको लागि, उहाँको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
पढ्नुहोस् जोसेस गिमिनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
तथ्य # १ - ट्याटूहरू:
यो स्पष्ट छ कि मार्सेल सबिट्जरको लेखनको समयमा कुनै शरीर कला छैन। बरु ऊ in फिट र १० इन्चको मध्यम प्रभावशाली उचाईमा दाग नलगाउने छाला flaunting बरु प्रेममा छ।
यस जैव लेख्ने क्रममा उनीसँग कुनै ट्याटू नभएको फोटो प्रमाण।
अप्रिल २०१ In मा अट्याकि Mid मिडफील्डरले रेड बुल लाइपजिगसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसले उनलाई उसको ठूलो तलबको जालमा फँसाएको देखे। 4.5 मिलियन यूरो (4.1 मिलियन पाउन्ड) प्रति वर्ष। त्यो स numbers्ख्यामा क्रunch्चing गर्दै हामीसँग मार्सेल सबिट्जरको तलब आय छ प्रति वर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड (लेखेको समयमा जस्तै).
प्रति वर्ष € 4,500,000 £ 4,174,747 $ 5,029,110
प्रति महिना € 375,000 £ 347,895 $ 419,092
प्रति हप्ता € 93,750 £ 86,973 $ 104,773
प्रति दिन € 13,393 £ 12,424 £ 14,967
प्रति घण्टा € 558 £ 517.7 £ 623.6
प्रति मिनेट € 9.3 £ 8.63 £ 10.39
प्रति सेकेन्ड € 0.15 £ 0.14 £ 0.17
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो मार्सेल सबिट्जरबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… अस्ट्रियामा सामान्य मानिस कम्तिमा पनि काम गर्नु पर्छ 8.1 वर्ष कमाउन € 375,000, जुन मार्सेल सबिट्जरले एक महिनामा आर्जन गर्छ।
मार्सेल धूम्रपान गर्दैनन् र उसलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण पेय पदार्थको लागि दिइएन किनकि उनी सँधै स्वस्थ र धारिलो रहनको लागि सँधै सजग रहन्छन्।
मार्च २०२० मा मार्सेलको overall 83 को प्रभावशाली समग्र फिफा रेटिंग छ! चाखलाग्दो कुरा के छ भने, रेटिंग्स कतै जाने छैन तर जब सम्म उसले उसको 2020 85 को सम्भावित रेटिंग प्राप्त गर्दैन।
उनीसँग थप सुधारहरूका लागि कोठाको साथ अद्भुत रेटिंग्स छ।
तथ्य # - - मार्सेल सबिट्जरको धर्म के हो ?:
थर “सबित्जर"एक ईसाई नाम होईन, त्यसैले हामीले मार्सेल सबित्जरका आमा बुबाले उनलाई एक इसाई हुर्काउने सम्भावनालाई इन्कार गर्यौं। सत्य यो हो, मिडफिल्डर लिने समयमा धर्ममा ठुलो हुँदैन। त्यस्तै गरी, उसले विश्वासको मामिलामा पार्ने असरबारे ठ्याक्कै भन्न सकिंदैन। यद्यपि, अनौंठो कुरा उहाँलाई अविश्वासीको पक्षमा छ।
मार्सेल सबिट्जरको विकी:
हाम्रो मार्सेल सबिट्जरको जीवनी तथ्यमा अन्तिम, हामी तपाईंलाई उनको विकी नॉलेजबेस प्रदान गर्दछौं। तलको तालिकाले तपाईंलाई उसको बारेमा संक्षिप्त र सजिलो तरिकामा जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
मार्सेल सबिट्जरको जीवनी तथ्य (विकी ईन्क्वायरीज)
पुरा नाम: मार्सेल सबिट्जर
जन्म मिति: १ March मार्च १ 17 1994 ((उमेर २ 25)
अभिभावक: हेरफ्रीड सबिट्जर (पिता) र सानो ज्ञात आमा।
Siblings: एक बहिनी (नाम अज्ञात)
आफन्तहरू: थॉमस सबिट्जर (कजिन)
साथी: काटजा Kühne (प्रेमिका र पत्नी हुन)
वजन: Kg 74 किलोग्राम (अघिल्लो तथ्याats्क)
पारिवारिक मूल: ग्राज, स्टायरिया, अष्ट्रिया।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मार्सेल सबिट्जर बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।